Free Burma Ranger အဖွဲ့မှ မြန်မာပြည်သူများသို့ သတင်းစကားပါးသည့် ဗီဒီယိုထုတ်ပြန်(ရုပ်သံ) - Top Cele News
Free Burma Ranger အဖွဲ့မှ မြန်မာပြည်သူများသို့ သတင်းစကားပါးသည့် ဗီဒီယိုထုတ်ပြန်(ရုပ်သံ)
ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်နီးပါးနေထိုင်ပြီး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် စစ်ပွဲအတွင်း ပိတ်မိပြည်သူများကို ကူညီကယ်ဆယ်သည့်လုပ်ငန်းများကိုအဓိက လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည့် Free Burma Rangers အဖွဲ့က
ယနေ့ တွင် မြန်မာပြည်သူများသို့ သတင်းစကားပါးသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ပေးပို့လာခဲ့ပါသည်။ဗီဒီယိုတွင် FBR ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဒေးဗစ်ယူဘန့် နှင့် သူ၏မိသားစုတို့ပါဝင်ပြီး FBR အနေဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ တရားမျှတမှုနှင့် အမျိုး သားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး
တို့အတွက် ရပ်တည်ကြောင်း၊FBR အနေဖြင့် စစ်ဘေးရှောင်များကိုကူညီကယ်ဆယ်ခြင်း၊ မျော်လင့်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့ ကိုအခြေခံပြီး မြေပြင်သတင်းများကို ပြည်သူများသိအောင်လုပ်ဆောင်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အဖွဲ့တွင် ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံမှ အဖွဲ့ဝင်များ
ပါရှိကြောင်း၊၎င်းနှင့်တကွ မိသားစုတို့သည် စစ်ဘေးသင့်ဒေသများမှ ကလေးသူငယ်များအတွက်လည်း အစီ အစဉ်များ၊ ရှေးဦးသူနာပြုလုပ်ငန်းများ စသည်တို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ကြကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အားမလျော့စေလိုကြောင်း
နှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို လက်ကိုင်ထားကြစေလိုကြောင်း၊FBR အနေဖြင့် အစိုး ရအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ တရားမျှတရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ရပ်တည်ကြောင်း ဗီဒီယိုတွင် ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။Free Burma Ranger အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ
ပဋိ ပ က္ခဖြစ် ပွားနေသော ဒေသများတွင် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တစ်ရာကျော်ဖြင့် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအား ကူညီကယ်ဆယ်ရေးနှင့် မြေပြင်အခြေအနေများကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး
အဖွဲ့ခွဲများတည်ရှိသည်။Free Burma Ranger အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို www . freeburmarangers . org နှင့် www . facebook . com/FreeBurmaRangers/ တို့တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်.
ကရငျပွညျနယျအပါအဝငျ တိုငျးရငျးသားဒသေမြားတှငျ နှဈပေါငျးသုံးဆယျနီးပါးနထေိုငျပွီး လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှုနှငျ့ စဈပှဲအတှငျး ပိတျမိပွညျသူမြားကို ကူညီကယျဆယျသညျ့လုပျငနျးမြားကိုအဓိက လုပျဆောငျလြှကျရှိသညျ့ Free Burma Rangers အဖှဲ့က
ယနေ့ တှငျ မွနျမာပွညျသူမြားသို့ သတငျးစကားပါးသညျ့ ဗီဒီယိုတဈခုကို ပေးပို့လာခဲ့ပါသညျ။ဗီဒီယိုတှငျ FBR ၏ ခေါငျးဆောငျဖွဈသူ ဒေးဗဈယူဘနျ့ နှငျ့ သူ၏မိသားစုတို့ပါဝငျပွီး FBR အနဖွေငျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ၊ တရားမြှတမှုနှငျ့ အမြိုး သားပွနျလညျသငျ့မွတျရေး
တို့အတှကျ ရပျတညျကွောငျး၊FBR အနဖွေငျ့ စဈဘေးရှောငျမြားကိုကူညီကယျဆယျခွငျး၊ မြျောလငျ့ခွငျးနှငျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတို့ ကိုအခွခေံပွီး မွပွေငျသတငျးမြားကို ပွညျသူမြားသိအောငျလုပျဆောငျကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့အဖှဲ့တှငျ ဘာသာပေါငျးစုံ လူမြိုးပေါငျးစုံမှ အဖှဲ့ဝငျမြား
ပါရှိကွောငျး၊၎င်းငျးနှငျ့တကှ မိသားစုတို့သညျ စဈဘေးသငျ့ဒသေမြားမှ ကလေးသူငယျမြားအတှကျလညျး အစီ အစဉျမြား၊ ရှေးဦးသူနာပွုလုပျငနျးမြား စသညျတို့ကိုလညျး လုပျဆောငျကွကွောငျး၊ မွနျမာပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ လှတျမွောကျရေးအတှကျ
နှငျ့ ခှငျ့လှတျခွငျးတရားကို လကျကိုငျထားကွစလေိုကွောငျး၊FBR အနဖွေငျ့ အစိုး ရအပါအဝငျ မွနျမာပွညျသူမြားနှငျ့အတူ တရားမြှတရေးနှငျ့ ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးအတှကျ ရပျတညျကွောငျး ဗီဒီယိုတှငျ ဖျောပွပါရှိပါတယျ။Free Burma Ranger အဖှဲ့သညျ မွနျမာနိုငျငံရှိ
ပဋိ ပ က်ခဖွဈ ပှားနသေော ဒသေမြားတှငျ ကူညီကယျဆယျရေးအဖှဲ့ တဈရာကြျောဖွငျ့ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားအား ကူညီကယျဆယျရေးနှငျ့ မွပွေငျအခွအေနမြေားကို ပွနျလညျဖွနျ့ဝပေေးသော အဖှဲ့အစညျးတဈရပျဖွဈပွီး အီရတျနှငျ့ဆီးရီးယားနိုငျငံမြားတှငျလညျး
အဖှဲ့ခှဲမြားတညျရှိသညျ။Free Burma Ranger အဖှဲ့၏ လှုပျရှားမှုမြားကို www . freeburmarangers . org နှငျ့ www . facebook . com/FreeBurmaRangers/ တို့တှငျ ဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျပါသညျ။ လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ.